U samee shaxanka ugu fiican e-maylkaaga BeeFree | Abuurista khadka tooska ah
BeeFree, tifaftiraha iimaylka tooska ah ee bilaashka ah ee bilaashka ah
Manuel Ramirez | | Qalabka Naqshadeynta, habyaalada
Maanta isticmaalka emaylku waxtar ayuu u leeyahay waxyaabo badan, oo ay ka mid tahay suurtagalnimada in aan sameyn karno joornaallo ama aan ka iibin karno adeegyadayada tirada badan ee xiriirada aan la yeelan karno.
Qaab fiican oo loo wajaho laakiin taas oo aan ugu baahanahay xoogaa maskaxdeena ah iyo hal-abuurkeena si aan u bilowno dhiirrigelin ama joornaal oo runtii ka dhigaya xiriiradayaga inay joojiyaan daqiiqad si ay u akhriyaan. Haddii aadan rabin inaad waqti badan ku lumiso sameynta shaxanka naftaada, waxaa jira aalado web gaar ah oo naga caawiya macnahaas oo ah kan aan maanta ka soo qaadanno khadadkaas ku yaal Creativos Online oo loo yaqaan 'BeeFree'.
BeeFree wuxuu leeyahay hadiyado waaweyn si loo abuuro emayl soo bandhigaya adeegyadayada wax kastoo ay yihiin. Taas ka sokow waxaad fursad u leedahay luqadda beddelo u dhexeeya Ingiriisiga, Talyaaniga iyo Isbaanishka si loo fududeeyo xitaa in wax laga beddelo warsidahaas ama emaylka.
Isla marka aan bilowno abuurista shaxanka, waxaad kala dooran kartaa inta udhaxeysa ama sheybaarada aasaasiga ah loogu talagalay ogeysiis, e-ganacsi, warside ama fudud. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in qaarkood durba la yimaadeen qaab aan si dhakhso leh u beddeli karno sawirrada halka kuwa aasaasiga ahi ay noqon doonaan uun nusqaanno innagu ku jirta oo aan ku wada ridi doonno hal-abuurkeenna oo dhan.
Xilliga aan aadeyno sheybaar Waxaan ku arki doonnaa shaashadda weyn ee aan ku dari karno baloogyada, wax ka beddel sawirada, beddel qoraalka, dooro midabada asalka iyo waxyaabo kaloo badan. Sida ay u fududahay xulashada baloogga oo wax looga beddelo kor ilaa kor midab, xuduud, ama taariikh. Haddii aan xulno qoraal, waxaan heleynaa qalab aasaasi ah, laakiin dhameystiran si aan si fudud ugu sameysano warside ama xayeysiin.
BeeFree, aan dhahno isku day inaad wax ku xalliso qaab fudud iyo dhibaatooyin la'aan markaa markii aan dhammaystirno shaxankayaga ayaan soo dejisan karnaa faylka ama ku diri karnaa MailUp. Waxaa jira qalab kale laakiin BeeFree oo ku jira beta phase wali waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican hadaanay ahayn kan ugu fiican hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » habyaalada » BeeFree, tifaftiraha iimaylka tooska ah ee bilaashka ah ee bilaashka ah
Baakad bilaash ah oo dhaxan iyo burush baraf ah